Naya Post Nepal | रामकुमारी झाँक्रीले बालेनको किन गरिन रुँ दै यति धेरै प्रशंसा ? दलहरुलाई स’च्चिन अन्तिम मौका (भिडियो सहित)
रामकुमारी झाँक्रीले बालेनको किन गरिन रुँ दै यति धेरै प्रशंसा ? दलहरुलाई स’च्चिन अन्तिम मौका (भिडियो सहित)
काठमाडौं, ६ जेठ / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समा जवादी) की नेतृ तथा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्धवार बा लेन शाहलाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताएकी छन् । उनले आफूले शाहलाई सफल भएको हेर्न चाहेको पनि बताई्न् ।
उनले भनिन्–‘म उहाँलाई सक्सेस भएको हेर्न चाहन्छु, उहाँको उमेरमा हामीले निर्वाचन लड्ने मौका पाएनौं, हामी पार्टीको अ र्थोडोक्स सिस्टमभित्र बसेकोले विद्रोह गर्न सकेनौं । उहाँले ग र्नुभयो । बालेन शाहजीलाई मेरो पार्टीमा वेलकम गर्न चाहन्छु । तपाईँ सक्सेस हुनुहोस ।’
झाँक्रीले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आ फूहरुकोलागि अपेक्षित नै रहेको बताएकी छिन् । उनले आ फूहरुको लागि वि’द्रो’ह बाध्यता रहेको सुनाईन् । आफ्नो पा र्टीले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्राप्त गरेको परि णामबाट विचलन नभएको उनको भनाई छ ।
हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चा हन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले एमाले विशाल पार्टी नै भएको र अहिले एमालेलाई हराउन आफूहरु काफी नै भएको बताईन् । यसपटक आफूले पनि नेपाली कांग्रेसलाई मत हालेको उनले बताईन् ।
उनले आफूहरुको पुस्तामा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हिँड्ने र एक अर्काको सह–अस्तित्व स्विकार गर्ने संस्कृति रहेको सु नाईन् । उनले आफू अहिलेपनि गठबन्धनकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले यो गठबन्धन आजको ज’बरजस्त आवश्यकत्ताले बनेको दा’बी गरिन् ।
२०७९ जेष्ठ ७, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 3447 Views